Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray Xerada Qaybta 21aad (SAWIRRO) | Dhacdo
Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray Xerada Qaybta 21aad (SAWIRRO)
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta kormeeray Xerada Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee duleedka Magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweynaha ayaa dhiirigelin ugu tagay Ciidanka Xoogga Dalka ee Qaybta 21aad, isagoona ku booriyay inay sii wadaan hawlgalada ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab.
Madaxweynaha oo la hadlayay ciidamada ayaa sheegay in xilligan uu dalku doorashada gelayo ay tahay inay sii laba jibaaraan hawlgalada.
“Aad iyo aad baan Ciidamada Qalabka Sida, guud ahaan ugu mahadcelinaya oo idinkaga mahadcelinaya waajibaadkii adkaa ee aad soo gudateen iyo sida aad u difaacdeen dalka, cadowga uga hortaagan tihiin, uguna burbursaan meel kasta oo ku haboon. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaya.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Waxa kaloo uu yiri “Naf hurnimada, diyaargarowga, habeen iyo maalin aad qoraxda iyo qabowga u joogtaan, waa waajibaadkii aad u dhaarateen, waa waajibaadkii dalka idinka saarnaa, difaaciina dadkiina, dalkiina iyo diintiina.”
Madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay ciidamada hawlgalada gaarka ahi fuliya, waxaana uu yiri “Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaya ciidamada hawlgalada goonida ah fuliya, ee sida gaarka ah u hawlgala, waxaan idin leeyahay howshiina halkii ka sii wada, horey u wada, inta taako ka mida dalkeena ay jooggaan cadowga argagixisada ah, inta dadkeena iyo dalkeena ay amni iyo difaac u baahan yihiin, waajib-na idinka saaran yahay. Waa u wada dhimaneynaa, waana u soo dhimateen, waana u soo shaqeyseen, halkaa ka sii wada, Insha’Allah.”
Madaxweyne Qoorqoor ayaa xusay ka maamul ahaan inay garab-taagan yihiin ciidamada, oo uu ku ammaanay inay horey u soo guteen waajibaadkooda, haatan-na uu suggayo waajibaadkii hore mid ka ballaaran.
“Inaguna si buuxdaa idin garab-taaganahay, idinkoo waajibaadkiina horey u gutay amniga, soo shaqeeyay, shaqeynaya, maanta masuuliyaddii hore mid ka ballaaran ayaa idin sii saaran. Tii hore la dagaalanka cadowga iyo ka shaqeynta amniga, maantana waxaa dheeri ah oo waajibaad kaloo cusub ah inuu dalkeenu doorasho gelayo, doorasho loo diyaargaroobayo, doorashaduna ay leeyahay masuuliyad iyo diyaargarow dheeraad ah.” Ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor.
Qoorqoor ayaa hadalkiisa ku soo gunaanuday “Guud ahaan Ciidamada Qalabka Sida waxaan leeyahay diyaargarowgiina, difaaciina, heegankiina iyo hawlgaladiina dardargeliya. Gaar ahaan ciidanka loo diyaariyay ee loogu talagalay inay howlaha gaarka ah ee muhiimadda goonida ah leh fuliyaan. Iyaga iyo taliskooduba waan bogaadineynaa, waxaana idin leenahay guuleysta, xaqiijiya waajibaadkiina, waad xaqiijiseynee horey u sii wada.”